“बाबू छिट्टै घर आइजा“-बिबेक बुढा(नरेश) - Tripura Sanchar
“बाबू छिट्टै घर आइजा“-बिबेक बुढा(नरेश)
“बाबू छिट्टै घर आइजा“‘’कोरोना संक्रमणका कारण फलानो देशमा यतिको मृत्यु, नेपालमा पनि यति संक्रमित“ “ खै अब त दाल तरकारी सबै सकियो ! बाहिर जान पनि दिदैँनन । राहतले मात्र खै कतिदिन पुग्ला “ “ पैसा पनि त सकिन लाग्यो “ यी शब्दहरु आजकाल म धेरै नै सुन्न थालेको छु । धेरै नै । आखिर कतिन्जेल । परिक्षा पनि नजिक आउदैँ छ । एकै छिन किताब पल्टाउनु पर्यो । म सोच्छु अनि फेरि मेरा कानमा गुन्जिन थाल्छन यी शब्दहरु । “ यिlockdown बढ्यो फेरि परीक्षा सर्यो “ आखिर घरबाट यत्ती टाढा रहेर यो अत्ति नै संबेदनशिल अबस्थामा म एकरत्ती पनि सुरक्षित महसुस गर्दिन । अनि यदाकदा मा सुन्नमा आउँछ “ घर जान पाइन्छ रे “ अनि अलि राहत महशुस गर्न थाल्छ यो मन । यो न घरको न घाटको परिस्थितिको अन्त्य हुन्छ कि भन्ने सोचेर म फेरि आश्वासित महशुस गर्छु । यो विपदको अवस्थामा अझ पीडा थप्ने घरबेटिको घरभाडाको कचकचबाट टाढा आफ्नै घरको छानो मुनि पुग्छु कि भनी आश्वाशित महशुस गर्छु । अनि फेरि म सुन्छु “ त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले बिध्यार्थीको उध्दार को लागि तयार गरियका गाडिहरुलाइ आर्थिक सहयोग गर्न इन्कार गरेको छ । “ अब यस अबस्थामा मेरो मन रुन थाल्छ । आखिर किन यतिका लापर्वाही । यसरी बिपदको चपेटामा परेका बिध्यार्थिहरुमाथी अझ कस्तो बिपद आइपर्ला भन्ने नसोचिकनै यो निर्णय लिनु आफैँमा , के तपाईं कुर्सिमा बस्नुभएका माननियहरुको लागि हाँस्यास्पद कुरा हैन र ? ठुलिभेरि नगरपालिका लगायत अरु सबै गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट बाहिर रहेका विध्यार्थिको उद्धारका लागि चाहिने रकम सबै जुटाएर क्वारेन्टाइनको को पनि व्यवस्था गरिसकेको भन्ने सुन्दा तपाइँहरुले चाहिँ meating मा आफ्ना बिध्यार्थी हरु नआएपनी हुन्छ भन्ने निर्णय गर्नु कत्तिको लज्जास्पद कुरा हो ? पास पाइसकेका गाडिहरुका लागि यत्ती रकम हाल्न खै कत्ती गार्हो परेको हो नगरलाइ । हामी बाटोमा गाडी नपाए हिडँन तयार छौँ , हामी तपाइँले जत्ती भन्नुहुन्छ safe क्वारेन्टाइनfollow गर्न पनि तयार छौँ , बस हामी घर जान चाहन्छौ । सुरक्षित महसुस गर्न चाहन्छौ । र म मान्दिन कि एक आमाले सन्तानलाई यो बिपदको घडिमा आफुबाट टाढा राख्न चाहन्छिन । म मान्दिन कि मेरा अबिभाबक तपाइँहरुले यो निर्णय लिनुभयो । अनि मलाइ बिश्वास छ हामी सबै बिध्यार्थी हरु नगरकै आर्थिक सहयोगमा आफ्नी आमाको काखमा पुग्नेछौँ ।
लेखक त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका डोल्पा हाल काठमाण्डौ हुनुहुन्छ ।
“बाबू छिट्टै घर आइजा“
Previous articleदेश फेरि राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फस्ने खतराः राप्रपा
Next articleज्ञानेन्द्र शाही ललितपुरबाट पक्राउ